Fotoana famakiana: 4 minitra Misy be dia be ny antony mahatonga ny olona tia dia lavitra. Ny iray amin'ireo olona ianao dia afaka mandre matetika indrindra dia ny fahafahana hanana fanandramana vaovao sy mampientam-po. Nahoana no mandeha tsara tarehy dia samy hafa toetra ho zava-po isan-karazany. Junkies adrenaline…
Fotoana famakiana: 3 minitra Underground Art amin'ny metro toby toa ny vaovao tranombakoka ny olona. Izy ireo dia tsy maintsy lasa ny vaovao-mahita toerana ho an'ny zavakanto sy ny famolavolana mpankafy. Iza moa no mba nieritreritra? Ny sasany manome aingam-panahy indrindra sehatra-bahoaka, fampidirana zavakanto sy famolavolana lehibe dia hita…
Fotoana famakiana: 4 minitra Hostels efa nanana ny rap ratsy noho ny maloto, pahina, ary maimbo be. Fa fantatrao ve fa nohatsaraina ny trano fandraisam-bahiny ankehitriny? Ho an'ireo izay tsy mahafantatra izay tranom-bahiny dia, tsy nandiso tsipelina diso fotsiny ny hotely izahay ary niara-nihazakazaka taminy. Hostels ireo trano mora vidy…